परीक्षा हलमै विद्यार्थीको सोधाई :‘सर, यो प्रश्नपत्र कि पर्चा ?’ | नुवागी
०४ असार २०७८
परीक्षा हलमै विद्यार्थीको सोधाई :‘सर, यो प्रश्नपत्र कि पर्चा ?’
भक्तपुर । परीक्षा चलिरहेको थियो, परीक्षा सकिन त्यस्तै आधा घन्टा मात्र बाँकी थियो । त्यही बेला परीक्षाहलकै एक परीक्षार्थी जुरुक्क उठेर परीक्षा हलमा ‘गार्ड’ बसिरहेका शिक्षकलाई प्रश्नपत्र देखाउँदै सोधे, ‘सर, यो के हो ? यसको नि एन्सर लेख्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो त पर्चा जस्तो छ ।’
विद्यार्थीको उक्त आवाज आएपछि परीक्षा हलमा भएका सबै विद्यार्थीबीच पनि खैलाबैला मच्चियो । शिक्षक आएर हेरे, प्रश्न सोध्ने विद्यार्थीको प्रश्नपत्र लिएर ओल्टाइपल्टाइ गरे । अनि अरु विद्यार्थीलाई पनि भने, ‘तिमीहरुको पनि त्यस्तै छ ? हेर्नु त ?’
सबैले प्रश्नपत्र हेरे, सबैको उस्तै रहेछ ।
प्रश्नपत्रको सबैभन्दा पछिल्लो पानाका अक्षरहरु अघिल्लो पानाका भन्दा निक्कै ठूल्ठूला थिए । सोही कारण विद्यार्थीहरु अलमलिएका थिए ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको शिक्षा समितिअन्तर्गतको परीक्षा समितिले लिइरहेको दोस्रो त्रैमासिक परीक्षामा दिइएको प्रश्नपत्रमा सो लापरबाही र मनपरी भटिएपछि विद्यार्थी अलमलिए भने शिक्षकहरु छक्क ।
‘विद्यार्थी अलमलिएका छन् भने हामी चाहिँ छक्क भएका छौं, परीक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा समितिले यत्तिसम्म लापरबाही गर्दा रहेछन् भन्ने लाग्यो ।’ महेन्द्र शान्ति माविका एक शिक्षकले भने । नगरपालिकाभरका विद्यार्थी र शिक्षकहरुले अहिलेसम्म त्यो खालको प्रश्नपत्र नदेखेको बताए ।
परीक्षा समितिले बनाएको प्रश्नपत्र नै दुई ढाँचाको भएको स्वयम् परीक्षा समितिका सचिव एवं सिरुटार माविका प्रअ नारायण पोखरेल बताउँछन् ।
उनले सो गल्ती छापाखानबाट भएको जानकारी दिए । ‘हामीले जुन ठाउँमा छपाएका थियौं, त्यहाँ स्किल्ड म्यानपावर(दक्ष जनशक्ति) नहुँदा यस्तो भएको हो, प्रश्नपत्रमा भएको गल्ती हामीले महशुस गरिसकेका छौं ।’
उनले परीक्षा सञ्चालनको सुरुको अभ्यास भएकाले अनुभवको कमी हुँदा त्यो खालको त्रुटि हुन गएको बताए । उनले प्रश्नपत्रमा लापरबाही नभएको दाबी गर्दै छापाखानाबाटै त्यस्तो भएको बताए ।
यता परीक्षा शाखाका प्रमुख सरस्वती बस्यालले पनि प्रश्नपत्रमा गल्ती महसुस भएको स्वीकार गरिन् । ‘हामीले पहिल्यै प्रश्नहरु दिएका थियौं, प्याकिङ गरेर आएको थियो, खोल्दामात्र थाहा भयो, हामीबाट गल्ती भयो, सुधार्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ ।’ प्रमुख बस्यालले भनिन् ।
उनले परीक्षाजस्तो विषयमा आफूले पनि समय दिन नसकेकोमात्र नभएर परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी टीओर नहुँदा समस्या भएको बताउँदै आगामी दिनमा भने त्यस्तो नहुने बताइन् ।
माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार आफू मातहत आएपछि लिएको परीक्षाको प्रश्नपत्र बेढंगको भएको मेयर बासुदेव थापा पनि स्वीकार्छन्, उनले परीक्षा समितिबाट गल्ती देखिएको बताउँदै सिक्ने क्रममा भएको गल्तीलाई सच्याउने बताए ।
छात्राहरुलाई स्टेम कार्यशाला
ख्वपमा साढे तीन लाखमै बीबीएम पढाइ हुने